Qodobbada Xanuunada Warshadaha Iyo Faa'iidooyinka Wax Soo Saarka - Yan Tuo Composite Material Technology Co., Ltd.
Marka laga eego aragtida suuqa adduunka ee kaarboon kaarboon, saamiga suuqyada kaarboonka dalkayga ee sannadka 2019 wuxuu ka kacay 22.8% sannadka 2018 illaa 31.7%, taas oo ah wax lagu farxo. Tani waxay xiriir dhow la leedahay dadaallada shirkadaha si ay u horumariyaan xooggooda gudaha ayna u horumariyaan tayada una yareeyaan kharashyada sannadihii la soo dhaafay. Marka laga fiiriyo dhanka qiimaha, sanadka 2019, sababtoo ah yaraanta sahayda badan ee suuqa caalamiga ah iyo horumarka joogtada ah ee heerka xakameynta qiimaha ee warshadaha dabka kaarboonka dalkayga, sicirka kaarboonka dalkayga iyo qiimaha wax soo saarka caalamiga ah asal ahaan waxay kujireen Gobol isu dheelitiran, oo sameeya fiber-ka dalkayga iyo dhoofinta badeecadaha ku jira qaybo badan ayaa suurto galay. Iyada oo ay weheliso wax ka beddelka ku habboon ee waddankayga ee heerka dib-u-celinta canshuuraha dhoofinta, shirkadaha fiber-ka kaarboon waxay ka fiirsan karaan inay ka faa'iideystaan ​​fursadda ay ku ballaarinayaan suuqyada dibedda.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee tuubbada kaarboon kaarboon waa kaarboonka kaarboon. Faylka kaarboonku wuxuu leeyahay xoog siligga, jilicsanaanta iyo ka shaqaynta fudud, gaar ahaan aaladaha farsamooyinkiisu aad bay u wanaagsan yihiin. Faylka kaarboonku wuxuu leeyahay xoog is jiidjiid iyo culeys fudud. Marka la barbardhigo fiilooyinka waxqabadka sare leh, kaarboon kaarboonka ayaa leh awoodda ugu sarreysa ee gaarka ah iyo habka gaarka ah.
Si kastaba ha noqotee, sameynta tuubooyin kaarboon kaarboonka ka weyn dhexroor iyo dherer dheer ayaa had iyo jeer dhibaato weyn ku ahaa warshadaha kaarboonka. Tani sidoo kale waa dhibic weyn oo xanuun u leh dhammaan warshadaha tuubbada kaarboonka. Kaliya maahan tikniyoolajiyadda wax soo saarka, laakiin sidoo kale xiriir weyn ayey la leedahay qalabka wax soo saarka. Si loo xaliyo dhibaatadan, shirkadeenu kaliya ma shaqaalaysan farsamayaqaano xirfadlayaal ah oo mushahar sare qaata, laakiin sidoo kale waxay ku bixisay lacag aad u tiro badan dhisida qalab wax soo saar horumarsan. Waxay dhiirrigelisay horumarinta warshadaha fiber-ka.